नेकपा नेताकाे यस्ताे छ सत्ताकाे माेह, विपक्षमा रहँदा समर्थन सत्तामा पुग्दा मौन ! -
नेकपा नेताकाे यस्ताे छ सत्ताकाे माेह, विपक्षमा रहँदा समर्थन सत्तामा पुग्दा मौन !
तीन वर्षअघि डा। केसीको समर्थनमा ट्वीट गरेका एमाले नेता विष्णु रिमालले अहिले भने समर्थन वा विरोधमा कुनै ट्वीट गरेका छैनन्, सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेका पनि छैनन्
४ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०८:३६ 163 पटक हेरिएको
काठमाडौँ । पुस्तक प्रकाशन गृह फाइन प्रिन्टका प्रकाशक अजित बरालले प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले २०७१ चैत ११ मा गरेको ट्वीट मेन्सन गर्दै बिहीबार लेखे– ‘हिजो समर्थन, अहिले विरोध ।’ नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला पनि डा। गोविन्द केसी अनशन बसेका थिए ।
कोइरालाले डा। केसीको माग नसुनेको सन्देश दिने कार्टुन कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको थियो । वात्स्यायनले बनाएको उक्त कार्टुनको एक छेउमा केसी विभिन्न माग राखेर अनशन बसेको देखिन्छ भने अर्को छेउमा प्रधानमन्त्री कोइराला ‘माफिया’ लेखिएको कागजले कान थुनेर बसेको देखिन्छ । माफियाको इसारामा प्रधानमन्त्रीले सत्याग्रही केसीको माग बेवास्ता गरेको बुझाउने सोही कार्टुन राखेर ट्वीट गर्दै रिमालले लेखेका थिए– समर्थन कार्टुन ट्वीट ।
यसरी केसीको मागलाई समर्थन जनाउँदै ट्वीट गर्ने रिमाल अहिले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार छन् । तर सरकार भने डा। केसीको अनशनलाई ‘केही व्यक्तिको उक्साहट’ भनेर अथ्र्याइरहेको छ । तीन वर्षअघि डा। केसीको समर्थनमा ट्वीट गरेका रिमालले अहिले भने केसीको अनशनबारे समर्थन वा विरोधमा कुनै पनि ट्वीट गरेका छैनन् र सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् ।
डा। केसी पछिल्ला सात वर्षमा विभिन्न ६ सरकारका पालामा पटक–पटक अनशन बसिसकेका छन् । विगतमा सत्ताबाहिर रहँदा उनका मागमा समर्थन जनाउँदै सरकारको विरोध गरेका नेताहरू आफैं सत्तामा पुगेपछि भने अनुदार बन्दै आएका छन् । यसलाई सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर र फेसबुकमा ‘सत्तासीन दलका नेताहरूको दोहारो चरित्र छताछुल्ल भएको’ भनी टिप्पणी गरिएको छ ।
केदार शर्माले बिहीबार नै तत्कालीन एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष एवं हाल नेकपाका अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहालले डा। केसीको अनशनलाई समर्थन जनाउँदै शुभेच्छा पुस्तिकामा लेखेको हस्तलिखित सामग्री सेयर गरेका छन् । शर्माले लेखेका छन्– बेलाको खेला । उनले मेन्सन गरेको तस्बिरमा दाहालले लेखेका छन्– डाक्टर केसीको अभियान आम नेपाली जनताकै अभियान हो । उहाँका जायज माग अविलम्ब सम्बोधन गरी डा। केसीको अनशन तोडाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु स् प्रचण्ड अध्यक्ष नेकपा ९माओवादी०, १६ चैत २०७२ ।
यतिबेला दाहाल सत्तासीन दलका अध्यक्षसमेत हुन् । पार्टी एकीकरणअघि उनकै दलका नेता गिरिराजमणि पोख्रेल शिक्षामन्त्री छन् । त्यसरी केसीको माग अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर विचार राख्ने दाहाल अहिले भने केसीका मागप्रति अनुदार छन् । उनले केसीको माग सम्बोधन गर्नका निम्ति सक्रिय पहल गरेको पनि देखिँदैन ।
शर्माको ट्वीटमा प्रतिक्रिया जनाउने अधिकांशले दाहाल कसरी आफ्ना विचारमा अडिन सक्दारहेनछन् र कसरी राजनीतिक खपतका निम्ति उनले केसीलाई समर्थन गरेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । निरञ्जन ढकालले लेखेका छन्, ‘त्यो बेला प्रचण्ड कमरेडको पेटमा सामल थियो, अहिले मार्सी धानको चामल छ, फरक छ नि १ नेपाली दर्पण नामक ट्वीटर ह्यान्डल चलाउनेले भने छेपारोको तस्बिर राखेर लेखेका छन्, ‘यै छेपारो झैं रंग फेर्‍या हुन् कि प्रचन्न कामरेडले ।’
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं एकीकरणपछि नेकपाका प्रवक्ता रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले २९ मार्च २०१५ मा ट्वीटरमा शिक्षण अस्पताल पुगेर डा। केसीको मागमा समर्थन जनाउँदै तत्काल माग र मुद्दा समाधान गरेर उनको जीवन बचाउनुपर्छ भन्दै लेखेका रहेछन् । श्रेष्ठको पार्टी यतिबेला सरकारमा छ । डा। केसी तिनै पुरानै मुद्दा राखेर १५ औं अनशन बसिरहेका छन् । लेख्न त श्रेष्ठले बिहीबार पनि झन्डै आधा दर्जन ट्वीट डा। केसीको जीवन रक्षाका बारेमा लेखेका छन् । तर उनको हरेक लेखाइमा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले अनेकन प्रश्न तेस्र्याएका छन् ।
२०१६ को जुलाईमा अहिलेको प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले डा। केसीको अनशनलाई समर्थन जनाउँदै दुइटा ट्वीट गरेका थिए । २३ जुलाईमा उनले अख्तियारले डा। केसीलाई पागल भनेको कुराको विरोध जनाएका छन् । त्यस्तै १८ जुलाईमा हेलो सरकारलाई मेन्सन गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘आमरण अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि हेलो सरकारको ध्यान जाओस् ।
सम्माननीयज्यूबाट पनि ठोस पहल होस् ।’ २४ जुलाईमा भने उनले ट्वीट गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको एउटा मुख्य उपलब्धिका रूपमा डाक्टर केसीको अनशन अन्त्य गर्नु पनि हो भनेर लेखेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘प्रम ओलीले जाँदाजाँदै डा। केसीको जीवन रक्षाको दायित्व पूरा गरे, पूर्ववर्ती सरकारले गरेको कमजोरी समाधानको बाटो खोजे । हेरौं, अबकाले चैं के गर्छन् ।’
यसरी बारम्बार डा। केसीको माग र मुद्दाको समर्थन गर्ने पोख्रेलले अहिले केसीका मागबारे बोलेका त छैनन् नै, उनको मुद्दामाथि समर्थन वा विरोध जनाएर पनि लेखेका छैनन् ।
पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पनि केसीको समर्थन र विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा केही लेखेका छैनन् । तर उनी सम्मिलित सरकारले भने अनशनलाई विधिको शासनविरुद्ध ठानिरहेको छ । दुई वर्षअघि भने अधिकारी अहिलेजस्तो मौन थिएनन् । उनले १ डिसेम्बर २०१६ मा लेखेका थिए, ‘हरेक सरकार डा। केसीको माग पूरा गरें भन्छ । अनशन तोडिन्छ– जुस खुवाइन्छ । कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन । अब उनको माग पूरा होस् र यस्तो कुरा कहिल्यै नदोहोरियोस् ।’ सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले उनको दुई वर्ष पुरानो ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै पुरानो प्रतिबद्धता सम्झाइरहेका छन् ।
अनुसन्धानकर्मी शिशिर वैद्यले भने यही पुरानो ट्वीटमा प्रतिक्रिया जनाउँदै लेखेका छन्, ‘यही कुरा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भनिदिनुपरो मन्त्रीज्यू । यता त जनता कराइरहेकै छन् ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट